Websaydhada si loogu soo dejiyo faylasha GIF bilaash | Abuurista khadka tooska ah
Judith Murcia | | Khayraadka, dhowr
Waqtigan xaadirka ah, ilaha dhaqdhaqaaqa ayaa soo jiitay dareen ka badan sawirka taagan, taasi waa, dhaqdhaqaaq la'aan. Waxay ku jirtaa ajandaha in loo isticmaalo GIF-yada firfircoon ee loogu talagalay waxyaabaha ku jira shabakadaha bulshada.
Sidaan horay ugu baranay a boostada hore, halka aan ka hadalno sida loo sameeyo GIF oo leh Photoshop, xarfaha GIF waxay u dhigmaan soo gaabinta, waxay ka timaaddaa Ingiriisiga: Qaabka Isdhaafsiga Sawirka.
1 Kheyraadka Animated
2 Ku soo dejiso GIF bilaash
GIF waa a khayraad leh waxtar badan si loo soo jiito dadka isticmaala loona gaaro meeleyn sumcad wanaagsan. Laga soo bilaabo shabakadaha bulshada waxay noqdeen kuwo moodada markale tan iyo markii dadku jecel yihiin inay la xiriiraan sawiro dhaqaaqa. Waxaa jira noocyo badan oo iyaga ka mid ah, waxay ku faafeen fayras waxaadna ka heli kartaa nooc kasta.
Wixii ah shirkadaha GIF sidoo kale waa aalad awood badan, maadaama ay iyaga siinayso fursad ay kula xiriiraan hal abuur badan oo saamayn leh iyo ereyo kooban. Farriimaha waa kuwo gaagaaban, cad oo toos ah.
Ku soo dejiso GIF bilaash
Faa'iidada ugu weyn ee GIF waa inay si dhakhso leh u sameeyaan, laakiin taa ka sokow, waan heli karnaa degsiyo badan oo bilaash ah oo bilaash ah. Marka xigta waxaan ku siin doonnaa liistada goobaha aan ka heli karno dhammaan waxyaabaha ku jira qaabkan si fudud, dhaqso leh oo aan lacag looga bixin iyaga.
Waxaan ku bilaabaynaa Imgur, waa madal ay ka buuxaan waxyaabo muuqaal ah. Way fududahay in la isticmaalo waana laguu ogolaan doonaa la soco nuxurka dhammaan dhagaystayaasha. Waxaad ka heli doontaa sawirro qosol badan, xusuusta caanka ah iyo GIFs. Waxyaabaha ku jira boggan waxaa laga abuuray qoraallada adeegsadayaasha iska diiwaangeliya. Kuwani waa dad ka socda adduunka oo dhan oo daabaca una codeeya waxyaabaha ugu fiican.
Websaydhkani wuxuu noo oggolaanayaa inaan ku baari karno ereyo, waxyaabaha ugu caansan ee shabakadda, hasthags, iyo kuwo kale. Runtii waa madal aad u wanaagsan, waxaan ka hadalnaa in ka badan 250 milyan oo qof ayaa daalacanaya bishiiba.
Mid kale oo ka mid ah degellada ugu caansan ee la xiriira GIFs waa GIPHY, ayaa ka sarreeya dhammaantiis magaca weyn ee GIF ee download lacag la'aan ah. Waxay ku takhasustay qaab noocan oo kale ah waxayna runtii dabooshaa qaybo badan, looma dhihin waxaad ka heli kartaa wax kasta oo aad qiyaasi karto. Maskaxda ku hay in ay ku jirto ingiriisi, oo sidaas darteed, waa inaan ku qabannaa baaritaanka luqaddan si aan u helno waxyaabaha aan raadineyno si wax ku ool ah.
Waxaan u adeegsan karnaa mashiinkaaga raadinta ama shaandhada noocyada. Marka aan u helno GIF saxda ah ee baahiyahayaga, waxay na siin doontaa fursado dhowr ah oo aan ku helno. Waxay kuxirantahay isticmaalka aan rabno inaan siino, waxaan awoodnaa:
U keydi sida aad u jeceshahay isticmaalka mustaqbalka.
Nuqul xiriiriyaha xiriiriyaha.
Nuqul xiriiriyaha si loogu isticmaalo shabakadaha (warbaahinta bulshada, mp4, iwm)
Soo hel koodhka galka websaydh ama bog.
Waan sii wadaynaa Falcelinta, degel u taagan kor u qaadista GIF-yada si aan u muujino nafteena. Baadhitaankiisu gebi ahaanba wuu ka duwan yahay inta kale, halkii uu eray ka qori lahaa, wuxuu na weydiiyaa sida aan dareemayno ama maxay tahay su'aasheena. Waxay noo ogolaaneysaa inaan uga jawaabno eheladeena, asxaabteena GIF. Marka la soo koobo, ka hadal nafteenna animations-kan. Intooda badan waxyaabaha ku jira waa majaajillo, dhammaan noocyada niyadda: farxadda, xanaaqa, birta, oo ku jira liis ballaaran oo ballaaran.
Barxada GIFBin waa xoogaa ka duwan inta kale. Waxaan tan u leenahay maadaama ay tahay meel aan ka soo degsan karin, waxaan ku soo dhejin karnaa hal-abuurkeenna. Faa'iidada habkaani waa in ay jirto a fikradaha kala duwan, ku jira oo si joogto ah loo cusbooneysiiyaa. Waxay noo ogolaaneysaa inaan soo dejino GIF-yada mar dambe u dir xiriiradayada WhatsApp. Dhinac ka mid ah ereyada waxyaabaha ugu badan ee la isticmaalay ayaa lagu muujiyay, "astaamaha sare". Waa runtaa bilicsanaanta boggan waa mid aad u aasaasi ah, waxay umuuqataa mid xirfad ahaan kayar inta kale laakiin waxay hubaal tahay inay noo ogolaaneyso inaan helno waxyaabo faa iido leh oo aan helno waxa aan ubaahanahay
Waxaan ku soo afmeeraynaa ka hadalka karnay, bangiga muuqaalka oo ku takhasusay GIFs taas oo ah sii kordheysa. Isbahaysigiisa ugu weyn wuxuu la ahaa Google, oo go'aansaday in lagu bixiyo adeegyada GIPHY si loo bilaabo Iibsiga Tenor.
Waa inaad tan sharaxdo Isbedelka Google ayaa si buuxda loo caddeeyay, Maaddaama GIPHY ay ka kooban tahay mowduuc ku saabsan dabeecad cunsuriyad.
Dhinaca kale, faa'iidooyinka sida dadka isticmaala in aan ka heli doonno mahadsanid iibsigan waa dhab. Codsiyada waxay yeelan doonaan adeegsiga buuggan ballaadhan ee ballaaran ee sawirrada GIF, taas oo ah, codsiyada sida caadiga ah WhatsApp ayaa noo oggolaan doonta, mustaqbalka dhow, inaan adeegsanno dhammaan waxyaabahaas. Tenor ayaa noo ogolaanaya soo dejiso teebabka inaad gacanta ku hayso dhammaan waxyaabahaaga. Wax soo saarkiisa waxaa loo habeeyay labada Android iyo Mac.
Waxaan muujin karnaa, si ka duwan bogagga kale, in Tenor na GIF-yada qayb ahaan, muuqaal aad u fudud oo si fudud loo isticmaali karo. Marka aan go'aansano mid, waxay noo ogolaaneysaa inaan kala soo baxno feylka qaabab kala duwan iyo noocyo kala duwan oo xallin, tayo leh. Intaa waxaa dheer, dhinaca midig ayay na siin doontaa fursado badan ee GIF-yada la xiriira raadintayada. Qeybta hoose, dhammaan faahfaahinta farsamo, taasi waa, muddada saxda ah ee animation-ka, cabirrada iyo taariikhda abuurista iyo waqtiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Websaydhada si loo soo dajiyo GIF's